Enlight waa barnaamij gaar ah oo loogu talagalay dib-u-hagaajinta sawir | Abuurista khadka tooska ah
Instagram waa shabakad bulsheed marka laga reebo haysashada awooda warbaahinta bulshada, waxay sidoo kale bixisaa ikhtiyaarro aad u xiiso badan oo sawir-qaadista ah, gaar ahaan waxa ay yihiin miirayaasha gaarka ah.
Laakiin haddii qofku doonayo inuu lahaado awood aad u horumarsan oo ku saabsan qalabkooda gacanta ee iOS, waa inay u dhawaadaan codsiyada kale sida Enlight. Enlight waa codsi in isku qas dib u hagaajinta dijitaalka iyo miirayaasha inaad sawir tafatir ah aad ugudubto heer kale oo kujira qalab mobile sida iPhone.
Waxaan ka hadlaynaa barnaamij loo xushay inuu noqdo barnaamijkii 2015 kaydka App-ka ee dalalka sida Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka, Australia, Kanada ama Faransiiska, oo u muuqda mid leh ikhtiyaarrada aasaasiga ah sida jarista ama dalbada shaandhooyinka, si loogu gudbo kuwa xiisaha badan sida xakamaynta saxda ah ee codka, midabka iyo faahfaahin.
Hawlaha kale ee gaarka ah waxay maraan shaqada maaskaro, soo saarista qaabka kamaradaha caadiga ah, laba-midableyda midabka leh ama ku dar saamaynta monochrome. Waa barnaamij runtii leh waxoogaa astaamo ah oo ka duwan kuwa kale ee ku jira App Store, sida Pixlr-ka weyn.
Mana iloobi karno kuwiisa qalabka yareynta buuqa, wax ka beddel walxaha qaarkood ee sawirka ku jira ama ikhtiyaarradooda rog-rogidda ee abuuraya saameyntaas cajiibka ah haddii aad taqaanno sida dib loogu qaabeeyo xulashooyinkaas cilladahaas leh
Codsi gaar ah si uu isticmaalehu u awoodo hel natiijooyinka ugu fiican markii aad go'aansato inaad dib u dhigto dhinacyada qaarkood ee sawir laga qaaday iPhone-kaaga.
Qiimaheeda App Store waa 3,99 Dollar Oo hadda waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee sawir-celinta qalabka macruufka ah sida iPad ama iPhone. Marka, haddii aad raadineysay barnaamij sidan oo kale ah, ha ka fikirin wax badan, kama niyad jabi doontid.
Ku soo degso iftiiminta iOS
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Enlight waa aalad awood u leh dib u hagaajinta sawirka aaladda macruufkaaga